လူတယောက် အသက်ရှည် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ရာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား လိုပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းကောင်းနေရင် ပြင်ပရောဂါတွေ
အလွယ်တကူမဝင်နိုင်တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းနေအောင်လဲ အထောက်အပံ့တွေ လိုပါတယ်။ သာမန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တင် မလုံလောက်ပါ။ ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတဲ့ ပညာအသိ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လိုတာတွေ ဝယ်ယူဖြည့်နိုင်တဲ့ ငွေကြေး စသဖြင့် လိုအပ်တာ အားလုံး သဘောပေါက်ကြမှာပါ။ . နိုင်ငံတနိုင်ငံ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့လဲ ဒီလိုဘဲ ဘက်စုံတောင့်တင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ပညာရေး ကျန်းမာရေး ဆက်သွယ်ရေး ပို့ဆောင်ရေး စစ်ရေး အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့။ တဖက်ထဲ တမျိုးထဲ ထူးချွန်နေယုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါ။ ဒါတွေဖြည့်ဆီးနိုင်အောင် ဘဏ္ဏာရေး ၊ တနည်းပိုက်ဆံလိုပါတယ်။ . ခုတလော မဲဆွယ်ဖို့ တချို့ပြောလာတဲ့အထဲမှာ ဘာသာရေးလဲ ပါလာပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ရွာတရွာလို့ တင်စားလာရတဲ့ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ Identity ဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာရေး လူမျိုးရေးလဲ အလွှမ်းမခံရဖို့ အရေးတကြီးလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံ ရေရှည်တော့ တည်တံ့ပါရဲ့ ၊ လူမျိုးဘာသာကွယ်ပျောက်ခဲ့ရင် အလကားဖြစ်သွားမှာပါ။ . ကြားဖူးတာလေး နှစ်ခု ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးခါနီးအချိန်က ကိုရီးယားနိုင်ငံသား အများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ကိုရီးယားပြည်တွင်းစစ်လဲ ဖြစ်ပြီးရော ကိုရီးယားနိုင်ငံ အရမ်းဆင်းရဲနေပါတယ်။ အဲဒီလို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံတွေက အကူအညီပေးမှု အင်မတန် နည်းခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်မစ်ရှင်တွေက လူအား ငွေအားများစွာနဲ့ ကူညီခဲ့ကြလို့ ယနေ့ ကိုရီးယားမှာ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူ များပြားသွားပါပြီ။ သူတို့ကိုလဲ အပစ်တင်စရာ မရှိပါ။ မိမိလိုအပ်နေတဲ့အချိန်၊ စားစရာ နေစရာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ ကူညီသူကို အားကိုးကြမှာ ဓမ္မတာပါဘဲ။ . နောက်တခုက နာဂစ်အပြီးမှာပါ။ နာဂစ်အပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဧရာဝတီကလူတွေ တော်တော်ကို ဒုက္ခရောက်နေတာပါ။ နေစရာမရှိ၊ စားစရာမရှိ၊ လူသေတွေ အကြားမှာပေါ့။ အစိုးရကလဲ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကြီး အင်ထုဖို့ဘဲ ကြိုးစားနေတယ်။ အကူအညီဝေးလို့၊ လူနဲနဲဘဲ သေတာပါလုပ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပထမဆုံး ဧရာဝတီထဲ ရောက်သွားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့က သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ အဖွဲ့ပါ။ ဘာတွေတွေ့ခဲ့လို့ ဆရာတော်ကြီး
ဒီလောက်အလှူခံပြီး ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရင်၊ ဆရာတော်ကြီး တရားတွေနာကြည့်ရင် သိကြပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ .
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည်တည်ရေးအတွက် မျိုးချစ်စိတ် တခုထဲနဲ့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံချမ်းသာဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် အီသီယိုပီးယားထက် နိမ့်နေပါပြီ။ လူသယံဇာတ သဘာဝသယံဇာတတွေ ရှိသော်လည်း စီမံခံခွဲမှု ညံ့တဲ့အတွက် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်း ဝင်နေပါပြီ။ နိုင်ငံဆင်းရဲရင် အမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံ့ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရကလဲ ဝန်ကြီးတွေသာ
ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်တာ၊ နိုင်ငံ့အစိုးရ ချမ်းသာအောင် မလုပ်တတ်တာ သေချာနေပါပြီ။ ဒီတော့ အမျိုးချစ်သူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတိုးတက်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ ပါတီကို အစိုးရဖြစ်အောင် မဲပေးဖို့လိုပါပြီ။ . ဒါ့ကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာချစ်သူများ ‪#‎NLDကိုမဲပေးကြစို့‬၊ aplar.blogspot.com.